သက်ဝေ: နှစ်သစ်ကူး သန္နိဋ္ဌာန်
ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ December 31, 2009 at 12:33 AM
သန်းခေါင်ညနက် ဘလော့ထွက်မလည်တဲ့ ပို့စ်က သန်းခေါင်ကျော်ပြီး ဆယ်မိနစ် ယုံပါတယ် ယုံပါတယ် ယုံပါ့မယ်လို့
PAUK December 31, 2009 at 1:09 AM
2010မှာ ပြင်ပြီးလို့ ရခဲ့ရင်ပြောပြအုန်းနော်။။
ကြည် December 31, 2009 at 1:28 AM
ဟယ်တွေ့လား ၂ကျပ်ခွဲကြီးရမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်လို့။ ဒါဆို ပုံလေးတွေကော ကြည့်ရတော့မှာလားဟင်။
ခင်မင်းဇော် December 31, 2009 at 2:36 AM
ရပ်ကွပ်ထဲမှာ ဒီလိုပဲ ရှိတယ် ကျနော်တို့ ဘလော့ဂ်ကွပ် ထဲမှာ ဒီလိုပဲ..
Welcome December 31, 2009 at 2:48 AM
အစ်မတော့ အမှားကိုမြင်လို့ အမှန်ကို ပြုပြင်တော့မယ် ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါ၏။
အသက်ကြီးမှ ရတဲ့အကျင့်က ပြင်နိုင်ခဲသားပါ ..
ဒါကြောင့် ပါးပါးလေး ဆက်run လိုက်အုန်းမယ်
လှပတဲ့ နှစ်သစ်နေ့တွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်
Nge Naing December 31, 2009 at 4:12 AM
မကြိုက်တွေ အားလုံးက ကျွန်မနဲ့ လာတူနေပြန်ပြီ။ အဖေါ်ရလို့ ၀မ်းသာသွားပြီ။ ဒါပေမဲ့ နှစ်သစ်ရောက်ရင်တော့ အချိန်ဇယားဆွဲပြီး လုပ်ကြတာပေါ့နော့်။
ဝေလင်း December 31, 2009 at 4:41 AM
အင်း...ပြင်ဦးမှပဲ..။ ခက်တာက ပျက်တာကအစဉ်ဖြစ်နေပြီး..ပြင်လည်းခဏပဲခံနေလို့။ ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမလို့မရတာကိုမကြိုက်ဘူးဗျာ..
အစ်မ မကြိုက်တဲ့အထဲမှာ နှစ်ကျပ်ခွဲမပါဘူးပေါ့နော်။
အရင်တုံးက အချိုးမျိုးပြင်ကာ… လိမ်မာပါ့မယ်...” တဲ့လား။
နောင်နှစ်ခါလည်း ဆီးလို့ကြိုကွယ် မောင်ကြီးလာပါမယ်ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး
အစ်မတို့ တအိမ်သားလုံး ဖေဖေမေမေ၊ဘိုးဘိုးဘွားဘွားမှ အစပြုပြီး ခွေးကလေးကြောင်ကလေးတွေအထိ ပျော်ရွှင်သော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေသတည်း။
Moe Cho Thinn December 31, 2009 at 6:05 AM
ဒီလို မကြိုက်တာတွေကို ကြိုက်မိနေတာကို မကြိုက်ဘူး။
ဂျူနို December 31, 2009 at 6:24 AM
ကိုယ် မကြိုက်ပါဘူးဆိုတာတွေ လုပ်လုပ်မိနေလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မကြိုက်ဘူး။
khin oo may December 31, 2009 at 6:29 AM
khin oo may December 31, 2009 at 6:30 AM
ကြိုက်နေတာတွေ ကိုလုပ်နေမိလို့ ကြိုက်တဲ့သူက မကြို့က်ဘူး။
khin oo may December 31, 2009 at 6:31 AM
Thant December 31, 2009 at 9:46 AM
(တကယ်ပြောတာလား...တကယ်ပြောတာပါ....တကယ်ပြောတာပါ....) ဟားဟား..ရှေ့ဆက်မဆိုတတ်တော့ဘူး... :))))
Wish youaHappy New Year !!!!
ရွှေရတုမှတ်တမ်း December 31, 2009 at 10:47 AM
Hmoo December 31, 2009 at 11:31 AM
Happy New year....Sweet :)
THX4pre Happy new year greeting :)
Mooh December 31, 2009 at 1:17 PM
Himmm......thx4u do not write about who R U like the most :)
I'm shine :P
တန်ခူး December 31, 2009 at 2:37 PM
အိမ်ပြန်ရောက်ရင်facebookလည်လိုက်မယ်… ဒန့် ဒန် ဒန် ဒန့်ဒန့်ဒန်
ချစ်သူငယ်ချင်းသက်ဝေတယောက် နှစ်သစ်မှာ လိုအင်ဆန္ဒမှန်သမျှ(ဥပမာ.နှစ်ကျပ်ခွဲလိုမျိုး) ပြည့်ဝပါစေသော်ဝ်
SDL December 31, 2009 at 9:02 PM
ဟော..........ဒီက ယုံပေါင် ....
( ယုန်သားရဲ့ ပေါင်လေးတွေ လာရောင်းတာပါ)။ ငှက်ငှက်ငှက်....
pandora January 1, 2010 at 12:55 AM
ပျော်ရွှင်သော အေးချမ်းသော အောင်မြင်သော စထရက်စ်ကင်းဝေးသော လိုချင်တာတွေ အကုန်ရသော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ...
ကလူသစ် January 1, 2010 at 9:17 AM
Ko Paw January 1, 2010 at 4:52 PM
နှစ်သစ်မှာ လူတိုင်း နှစ်ကျပ်ခွဲတော့ ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေသတည်း....ဟီး။ နောက်တာပါ။
ဟိုတနေ့က တန်ခူးရှေ့မှာ “အစ်မ... အခုနေ မြန်မာပြည် တောဖက်မှာ ပြန်သွားပြီး အခြေချမယ်ဆိုရင် ဓားပြတွေ ဘာတွေ တိုက်မှာ စိတ်ပူရမလားမသိဘူး” လို့ လွှတ်ကနဲ ပြောမိလို့....“အံမယ်လေးဟယ်.... သက်ဝေပို့စ်ထဲက စကားနဲ့ ပြောရရင် လူမှန်ရင် နှစ်ကျပ်ခွဲတော့ ပိုင်ကြတာချည်းပါ၊ မြန်မာပြည်မှာ နင့်ထက် ချမ်းသာတဲ့လူတွေ တပုံကြီး နေနေကြပါတယ်၊ စိတ်မပူပါနဲ့” လို့ ပြန်ပြောတယ်ဗျ။ သြော်...နှစ်ကျပ်ခွဲ...နှစ်ကျပ်ခွဲ။
မီယာ January 2, 2010 at 9:36 AM
Happy new year မသက်ဝေ... မကြိုက်တာတွေ အကြောင်းရေးတာ အရမ်းကြိုက်သွားတယ်... တူတူပါပဲလေ...
P.Ti January 3, 2010 at 11:30 AM
Happy New Year ပါအမ။ ရောက်တာနောက်ကျသွားတယ်...
မကြိုက်တာတွေပြောရရင် အများကြီးပဲ။ အဲတော့ ကြိုက်တာရော၊ မကြိုက်တာရော ဘာမှ မပြောချင်တော့ပဲ နေလိုက်မိတယ်...
အမ မကြိုက်တာတွေကို ကျွန်တော်လည်း မကြိုက်ပါ...
momiji January 7, 2010 at 9:51 AM
Happy Happy New Year par..
သက်ဝေ January 7, 2010 at 3:35 PM
ဆုတောင်းတွေ အားလုံးအတွက် ပြောမပြတတ်အောင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
ရင်မှာ ပိုပို သတိရလာတယ် ဆိုတဲ့သီချင်းလေးလိုပါပဲ...
ကျန်တာတွေလျှော့ဖို့ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဘလော့ဂ်ကို လျှော့ဖို့တော့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်လောက်ဖူးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိနေပါတယ်...။
၂၀၁၀ နှစ်သစ်မှာ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေ အားလုံးနဲ့ အတူတူ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဘလော့ဂ်ကြတာပေါ့နော်...
အားလုံးပဲ Happy New Year ပါ...း))